စစ်အသုံးစရိတ်ကို နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်၏ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်း တောင်းခံ | ဧရာဝတီ
ခင်ဦးသာ| January 11, 2013 | Hits:8,321
| | မြန်မာ့ရေတပ်မတော်မှ စစ်သင်္ဘောတစီး (ဓာတ်ပုံ – မြဝတီ)
၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အစိုးရအဖွဲ့ အသုံးစရိတ် လျာထားငွေတွင် နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်၏ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းကို စစ်တပ်အသုံးစရိတ်အတွက် တင်ပြတောင်းခံထားရာ ယခင်နှစ် စစ်အသုံးစရိတ်ထက် မြင့်နေကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၂-၁၃ ဘဏ္ဍာာရေးနှစ်တွင် စစ်အသုံးစရိတ်ကို နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်၏ ၁၄ ဒသမ ၃၉ ရာခိုင်နှုန်း သုံးစွဲရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
“ငွေစာရင်း ကော်မတီဝင်တချို့ ပြောတာကတော့ စစ်တပ်အသုံးစရိတ်က ၂၁ ရာခိုင်နှုန်း ၀န်းကျင်အထိ တင်ပြထားတော့ တော်တော်ကြီး များနေတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ခွင့်ပြုပေးရေးကိစ္စကို လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးပြီးမှ ဘယ်လောက်ပဲ ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ကြမှာပါ” ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
၂၀၁၃-၁၄ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘတ်ဂျက် လျာထားငွေ စာရင်းများကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များထံ ယမန်နေ့က ဖြန့်ဝေပေးထားသော်လည်း ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် အသေးစိတ် မလေ့လာရသေးကြောင်း၊ စာရင်းကို ကြိုတင်ရရှိထားသည့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ပူးပေါင်းကော်မတီက ယခုအခါ စိစစ်သုံးသပ် စစ်ဆေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ သိရသည်။
ယခုနှစ်တွင် စစ်ရေးအသုံးစရိတ် တိုးတောင်းလာခြင်းသည် လက်ရှိဆင်နွဲနေသော ကချင်ဒေသ စစ်ပွဲများကြောင့် ကုန်ကျမှု များပြားသည့်အတွက်လည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ စစ်ရေးအသုံးစရိတ်သည် နှစ်စဉ်များနေသည့်တိုင် ယခင်ထက် တိုးမြှင့်ရန် မသင့်တော့ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်မောင်ရီ (ခ) ဦးခင်မောင်ရီက ပြောသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံက စစ်ရေးအင်အားကြီး နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ မလိုအပ်သေးတော့ စစ်အသုံးစရိတ်တွေ လျော့ချပြီးတော့ ပြည်သူတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး ကဏ္ဍတွေမှာ ပိုမိုသုံးစွဲသင့်ပါတယ်၊ စစ်အသုံးစရိတ်ဟာ ပြည်သူတွေအတွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်မနေသင့်ဘူး” ဟု ၎င်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
စစ်တပ်၏ အသုံးစရိတ်အား လျှော့ချကာ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရေး တည်ဆောက်ခြင်းကိုသာ အဓိကထား ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း၊ တနိုင်ငံလုံး တည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားပါက တိုက်စစ်စရာ မလိုတော့ဘဲ ပြည်သူတို့၏ လူမှုဘ၀ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟုလည်း ဦးခိုင်မောင်ရီက ပြောသည်။
၂၀၁၃-၁၄ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် နိုင်ငံပိုင်စီမံကိန်းများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ၀န်ကြီးဌာန ၃၄ ခု အတွက် အသုံးစရိတ် လျာထားငွေမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း ၄၆၈၉၆၁၉ ဒသမ ၈၆၂ တင်ပြထားကြောင်း၊ ၎င်းအနက် စစ်တပ် တခုတည်းအတွက် လျာထားငွေမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၀၆၇၃၆၅ ဒသမ ၆၀၃ သန်းဖြစ်ကြောင်း The Voice Weekly ဂျာနယ်၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာ၌ ဖော်ပြထားသည်။
စစ်တပ်သည် ဦးနေ၀င်းအစိုးရ လက်ထက်မှ နအဖ စစ်အစိုးရ လက်ထက်အထိ နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်၏ ထက်ဝက်နီးပါးကို သုံးစွဲခဲ့သော်လည်း တရားထုတ်ပြန်၍ ပြည်သူထံ အသိပေးလေ့မရှိပေ။၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး လွှတ်တော်များ ပေါ်ပေါက်ပြီးနောက်ပိုင်း တရားဝင် ထုတ်ပြန်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခု သီတင်းပတ်တွင် ပြန်လည်ကျင်းပနေသည့် ဆဋ္ဌမအကြိမ် လွှတ်တော်အစည်းများတွင် ဥပဒေကြမ်း ကိစ္စများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စများ၊ ခေတ်မမီတော့သည့် ဥပဒေတချို့ ဖျက်သိမ်း ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးကိစ္စ၊ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အခြေခံဥပဒေခုံရုံးကိစ္စများနှင့် ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အသုံးစရိတ် ကိစ္စများကို ဆွေးနွေးကြမည်ဟု ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောသည်။
စစ်တပ်က ရှမ်းရွာသားများပိုင် ပစ္စည်းကို သိမ်းသလားထမင်းရောင်းနေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးလွန်းမောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် “ဝ” တောင်းဆိုမှု လွှတ်တော် တင်ပေးမည်အစိုးရတပ် လေးလပတ် အစည်းအဝေး စတင်လွှတ်တော်တွင် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ကော်မတီ ဖွဲ့မည် နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Lailun January 12, 2013 - 1:50 am	Very poor country does not need four hundred thousand soldiers. North Korea and Burma have more soldiers than needed. Reduce the numbers of soldiers and reduce the budget. Military’s role in the country must be strictly for defense only like other democratic nations. Quality defense system is fine, not quantity. Waste of money and resources for this needless defense program is the core disease which harm the development of our country.
Reply	maungtan January 12, 2013 - 1:52 pm	I don’t understand that the Security Council asks 21% of the State Income. For what? To attack the Ethnic minorities? Myanmar is so poor. The state budgets should be used for development. not for weapons. Security council should share only 5% maximum of the State Budget.
Reply	Shwe January 13, 2013 - 6:04 am	I agree. Defense Ministry is only making the nation insecure. The previous administration had wasted too much budget to wage war on the people instead of listening from them. Budget to kill monks, peaceful protesters and ethnic cleansing. 5% is more than enough.
Reply	Thet Aung January 13, 2013 - 6:04 pm	ဒါတင်ဘယ်ကအုံးမလဲ..
မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူသန်း(၆၀)နဲ့ဆိုင်တဲ့ သယံဇာတတွေ၊ လုပ်ငန်းတွေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို ဦးပိုင်၊ MEC ခါင်းစဉ်တပ် စစ်တပ်စီးပွားရေးဆိုပြီး လူကြီးတွေနဲ့၊ လက်ဝေခံ ခရိုနီတွေ လက်ဝါးကြီးအုပ်ယူနေကြသေးတယ်..။
ဘတ်ဂျက်မှအပ ဦးပိုင်၊ MEC လုပ်ငန်းတွေဟာ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေးကို များစွာထိခိုက်စေလို့ အမြန်ဆုံးဖျက်သိမ်းသင့်ပါတယ်..။
Reply	ပြောင်ပြောင် January 16, 2013 - 9:52 am	၁၀% ကအိပ်ထဲထည့်ဖို့ပါ။း-)